INQUBOMGOMO YOBUMFIHLO | astroshopee.com - Okunye
Main Okunye INQUBOMGOMO YOBUMFIHLO
Inqubomgomo Yobumfihlo (Ngaphandle kwe-EU)
Inqubomgomo Yamakhukhi (Ngaphandle kwe-EU)
Isaziso Sobumfihlo Sabahlali BaseCalifornia
Inqubomgomo Yobumfihlo yabasebenzisi be-EU
Inqubomgomo yekhukhi yabasebenzisi be-EU
Usuku Lokuqalisa: Meyi 25, 2018
Iastroshopee Digital Media, LLC d / b / a astroshopee Industries, izinkampani eziphethwe kanye nezinkampani ezingaphansi kwayo (i 'Iastroshopee' , 'thina' noma 'thina' ) uyabazisa ubumfihlo babasebenzisi bethu nababhalisile. Silwela ukungafihli lutho mayelana nokuthi siluqoqa futhi silusebenzise kanjani ulwazi lwakho, ukugcina imininingwane yakho iphephile futhi sikunikeze nezinqumo ezizwakalayo. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ( 'Inqubomgomo' ) ichaza izindlela zobumfihlo ze- www.astroshopee.com iwebhusayithi ( 'Indawo' ), ephethwe futhi iqhutshwa yiastroshopee. Le Nqubomgomo yenzelwe ukukusiza uqonde ukuthi yiluphi ulwazi oluqoqwa yiastroshopee, kungani siluqoqa nokuthi senzani ngalo.
Le Nqubomgomo isebenza emisebenzini yethu yolwazi eku-inthanethi yeSayithi maqondana nabo bonke abasebenzisi ngaphandle kwabasebenzisi abangaphakathi kwe-European Union. Le Nqubomgomo ayisebenzi kwidatha yomuntu siqu eqoqwe nganoma yimaphi amawebhusayithi noma izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni, kufaka phakathi amawebhusayithi ongawafinyelela ngeSayithi. Lawo mawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza zingaba nezinqubomgomo zazo zobumfihlo, esikukhuthaza ukuthi uzifunde ngaphambi kokunikeza noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu ngazo noma ngazo. Iminikelo ethile eSizeni sethu, ingaba nezaziso ezingeziwe mayelana nemikhuba yolwazi nezinketho. Sicela ufunde lokho kudalulwa kobumfihlo okungeziwe ukuze uqonde ukuthi zingasebenza kanjani kuwe.
Sicela ufunde le Nqubomgomo ngokucophelela ukuze uqonde izinqubomgomo nezenzo zethu maqondana nemininingwane yakho nokuthi sizoyiphatha kanjani. Uma ungavumelani nezinqubomgomo nemikhuba yethu, ungasebenzisi iSayithi. Ngokusebenzisa iSayithi, uyavumelana nale Nqubomgomo. Le Pholisi ingashintsha ngezikhathi ezithile. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kweSayithi ngemuva kokwenza izinguquko kuthathwa njengokwamukela lezo zinguquko, ngakho-ke sicela ubheke Inqubomgomo ngezikhathi ezithile ukuthola izibuyekezo.
IZINGANE ZINGAPHANSI KWEMINYAKA ENGU-13
Isiza asihloselwe izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-13 ubudala, futhi asiqoqi ngokwazi imininingwane yomuntu siqu ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13. Uma sithola ukuthi siqoqe noma sathola imininingwane yomuntu siqu enganeni engaphansi kweminyaka engu-13 ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yabazali, sizosula lolo lwazi. Uma ukholwa ukuthi singaba neminye imininingwane kusuka noma enganeni engaphansi kweminyaka engu-13, sicela uxhumane nathi ku privacy@astroshopee.org .
IMINININGWANE SIYAYIQOQA NOKUTHI SIYIQOQA KANJANI
Singase siqoqe imininingwane kusuka nakuwe uma uxhumana futhi usebenzisa iSayithi. Lolu lwazi lungafaka imininingwane yomuntu (isb. Igama, ikheli le-imeyili, ikheli leposi, inombolo yocingo kanye neminye imininingwane yokuxhumana), imininingwane yezobuchwepheshe (isb. Ikheli le-IP, uhlobo lwesiphequluli, isihlonzi sedivayisi) nolwazi lokusebenzisa (isb. Amakhasi ewebhu owavakashelayo, izikhangiso ozichofozayo ku). Singahlanganisa lezi zinhlobo zolwazi ndawonye, ​​futhi ngokubambisana sibheke kulo lonke lolu lwazi kule Nqubomgomo Yobumfihlo njenge 'Ulwazi' . Imininingwane ingaqoqwa njengoba kuchaziwe ngezansi nangokusetshenziswa kwamakhukhi, ama-web beacons, amaphikseli, nobunye ubuchwepheshe obufanayo ngathi noma ngezinye izinkampani esenzela zona. Ngezansi uhlobo loLwazi esingaluqoqa:
Imininingwane Osinikeza yona.
lapho ubhalisa noma usebenzisa leSayithi, noma ubhalisela noma iyiphi insizakalo eSizeni, singakucela ukuthi unikeze imininingwane yomuntu ongakhonjwa ngayo, njengegama, ikheli leposi, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, noma enye eminye imininingwane yokuxhumana.
lapho usebenzisa iSayithi ukuxhumana nabanye noma ukuthumela, ukulayisha, ukubonisa noma ukugcina noma yikuphi okuqukethwe njengamazwana, izithombe, amavidiyo, ama-imeyili, okunamathiselwe, okokufaka kwezwi, nokunye okuqukethwe okwenziwe nguwe (ngokuhlanganyela, 'Iminikelo Yomsebenzisi') esidlangalaleni izindawo zeSayithi. Iminikelo Yakho Yomsebenzisi ingadluliselwa kwabanye futhi asikwazi ukulawula izenzo zabantu besithathu ongakhetha ukwabelana nabo Neminikelo Yakho Yomsebenzisi. Asikwazi futhi ukuvimbela ukusetshenziswa okuqhubekayo kwalolu Lwazi uma selwenziwe lwaba sesidlangalaleni.
singakucela ukuthi unikeze imininingwane lapho ufaka umncintiswano noma ama-sweepstake axhaswe yithi noma uphendula izinhlolovo esingahle sizithumele futhi sicele ukuziqedela eSizeni.
lapho ukhulumisana nathi ukubika inkinga ngeSayithi, noma eminye imibuzo ejwayelekile. Singagcina amarekhodi namakhophi ezincwadi zakho (kufaka phakathi amakheli e-imeyili, izinombolo zocingo, kanye neminye imininingwane oyinikezile).
lapho ubhalisela noma yiziphi izinsizakalo ezikhokhelwayo noma ubeka noma yimaphi ama-oda eSizeni, singagcina imininingwane yokuthengiselana okwenzayo ngeSayithi nokugcwaliseka kwanoma yimaphi ama-oda (qaphela ukuthi kungadingeka ukuthi unikeze imininingwane yezezimali ngaphambi kokufaka i-oda ngeSayithi).
uma kungenjalo usebenzisa iSayithi, njengemibuzo yosesho, umlando wokubuka, ukubukwa kwamakhasi, ukubuka okuqukethwe esikutholayo, noma ukufaka noma yimaphi ama-plug-ins ethu.
Ulwazi lobuchwepheshe, lokusetshenziswa nolokuhlaziya.
Singase siqoqe imininingwane ethile yezobuchwepheshe nokusetshenziswa lapho usebenzisa iSayithi lethu, njengohlobo lwedivayisi, isiphequluli, kanye nohlelo olusebenzisayo, okokuhlonza amadivayisi okuhlukile, ikheli le-IP, izilungiselelo zedivayisi neziphequluli, amakhasi ewebhu owavakashelayo, kufaka phakathi imininingwane mayelana uxhumana kanjani neSayithi lethu kanye nalabo esisebenzisana nabo kanye nolwazi olusivumela ukuthi siqaphele futhi sihlanganise umsebenzi wakho kuwo wonke amadivayisi nakuSayithi. Singabona idivayisi yakho ukukunikeza okuhlangenwe nakho okwenzelwe wena nokukhangisa kuwo wonke amadivayisi owasebenzisayo. Bona okwethu Inqubomgomo Yamakhukhi isigaba seminye imininingwane yokuthi singabusebenzisa kanjani lobu buchwepheshe ukuqoqa lolu lwazi.
Ungahle ukwazi ukufinyelela kuzici zeSayithi ngemiphakathi yangaphandle, izinkundla zokuxhumana, nezindawo zokuxhumana, izinsiza, ama-plug-ins, kanye nezicelo ('Amasayithi Wezindaba Zomphakathi'). Amasethingi akho obumfihlo kulawo maSayithi ezeMidiya Yezenhlalo, kanye nezinqubomgomo zawo zobumfihlo, azonquma ulwazi lomuntu siqu nolunye olungabiwa nathi, noma olutholwe yithina ngobuchwepheshe bokulandela umkhakha wezokuxhumana, lapho ufinyelela iSayithi, futhi eqoqwe futhi yasetshenziswa yilezi Zindawo Zokuxhumana. Lapho kuvunyelwe ngumthetho, ngokunikeza lolu Lwazi noma ngenye indlela ukuxhumana namaSayithi ethu ngeSocial Media Sites, uyavuma ukusetshenziswa kwethu kolwazi oluvela eSocial Media Site ngokuya ngale Nqubomgomo Yobumfihlo.
Imininingwane Yendawo. Siqoqa imininingwane yesikhathi sangempela emayelana nendawo okuyo, njengezwe lakho, uma ulinikeza noma ngemininingwane yedivayisi (njengekheli le-IP), noma indawo yedivayisi yakho lapho ufinyelela iSayithi ngedivayisi yakho yeselula.
SISEBENZISA KANJANI Imininingwane Yakho
Sisebenzisa imininingwane esiyiqoqayo ngawe noma oyinikeza thina ngezinjongo ezichazwe kule nqubomgomo noma ezidalulwe ngesikhathi sokuqoqwa noma ngemvume yakho, kufaka phakathi lezi zinhloso ezilandelayo:
Nikeza noma uhlaziye ukusetshenziswa kwakho kweSayithi nokuqukethwe kwayo, imikhiqizo, izinhlelo, nezinsizakalo.
Gcwalisa izicelo zakho kanye nanoma iyiphi enye inhloso oyinikeza yona, kufaka phakathi ukuxhumana nawe mayelana nokuthengile noma okwenzayo.
Sikunikeze izaziso mayelana ne-akhawunti yakho noma okubhaliselwe.
Thumela imininingwane mayelana nokukhushulwa, ukunikezwa, nezici zeSayithi.
Sikwazise uma uwina omunye wemincintiswano yethu noma ama-sweepstake.
Sikwazisa uma izibuyekezo zeSayithi zitholakala, nangoshintsho kunoma yimiphi imikhiqizo noma izinsizakalo esizinikezayo noma esizinikezayo noma kunjalo.
Nikeza, uthuthukise, ugcine, wenze ngezifiso, uvikele, futhi uthuthukise ulwazi lwakho neminikelo yethu eSizeni.
Linganisa usayizi wezithameli zethu namaphethini wokusebenzisa.
Gcina imininingwane mayelana nezintandokazi zakho, esivumela ukuthi senze ngokwezifiso iSayithi lethu ngokuya ngezintshisekelo zakho.
Sheshisa usesho lwakho.
Vikela, ukhombe, futhi uvimbele ukukhwabanisa nokunye okungekho emthethweni
Ukuqaphela lapho usebenzisa iSayithi.
Nikeza, thengisa, futhi ukhangise imikhiqizo, izinhlelo, nezinsizakalo ezivela kithi nakwabasebenzisana nathi, esibambisene nabo ebhizinisini, bese ukhetha abantu besithathu abangaba nentshisekelo kuwe. Singahle futhi sisebenzise imininingwane esiyiqoqayo ukukhombisa izikhangiso kuzithameli eziqonde ngqo kubakhangisi bethu.
Yenza izibopho zethu bese uphoqelela amalungelo ethu avela kunoma yiziphi izinkontileka ezenziwe phakathi kwakho nathi, kufaka phakathi inkokhelo nokuqoqwa.
Thola, uphenye, futhi uvimbele imisebenzi eSizeni sethu engase yephule imigomo yethu, ingaba yinkohliso, yephule ilungelo lobunikazi, noma eminye imithetho noma okungenzeka kube ngokungemthetho, ukuhambisana nezimfuneko zomthetho, nokuvikela amalungelo ethu namalungelo nokuphepha abasebenzisi bethu nabanye.
SIYABELA KANJANI SIDLULA ULWAZI LAKHO
Singabelana futhi sidalule Ulwazi oluhlanganisiwe nolukhonjwe ngabasebenzisi bethu ngaphandle komkhawulo. Ngaphezu kwalokho, singabelana futhi sidalule Ulwazi esiluqoqayo, noma unikeze ngezindlela ezilandelayo noma nganoma iyiphi enye injongo evezwe ngesikhathi sokuqoqwa:
Ngemvume Yakho. Singadalula imininingwane yakho lapho usinikeza imvume yakho yokwenza njalo.
Abahlinzeki Bezinsizakalo. Osonkontileka bethu, abahlinzeki bezinsizakalo, abahlinzeki bokuqukethwe, kanye nabanye abantu besithathu esibasebenzisayo ukusekela ibhizinisi lethu bangaba nokufinyelela Olwazini ukusiza ukufeza izinsizakalo abasenzela zona, njengokufaka, ukudala, ukugcina, ukusingathwa, kanye nokuletha Isayithi lethu, imikhiqizo, kanye nezinsizakalo; ukwenza ukumaketha, ukuphatha izinkokhelo, i-imeyili nokugcwaliseka kwe-oda; ukuphatha imincintiswano; ukwenza ucwaningo nokuhlaziya; nenkonzo yamakhasimende.
Ubunikazi obusha. Kumthengi noma omunye umlandeli uma kwenzeka kuhlangana, ukuhlukaniswa kwezimpahla, ukuhlela kabusha, ukuhlelwa kabusha, ukuncibilika noma okunye ukuthengiswa noma ukudluliswa kwezinye zezimpahla zethu, kungaba njengokukhathazeka okuqhubekayo noma njengengxenye yokuqothuka, ukuqedwa noma inqubo efanayo, imininingwane ephethwe yithi mayelana neSayithi lethu nabasebenzisi bayo iphakathi kwezimpahla ezidlulisiwe.
luyini uphawu lwango-september 26
Amasayithi axhunyiwe. Isiza singaqukatha izixhumanisi kwamanye amasayithi, kufaka phakathi Amasayithi Omphakathi. Singahlanganisa izinhlelo zokuxhumana zezinhlelo zokuxhumana nabantu noma ama-plug-ins ('ama-Plug-ins') avela kumanethiwekhi omphakathi, kufaka phakathi i-Facebook, i-Twitter, i-Instagram, iTumblr, i-Pinterest nabanye, kwiSayithi lethu. Ama-plug-in angadlulisa imininingwane emayelana nawe ayixhume ku-Platform ngaphandle kokuthatha isenzo sakho. Lolu lwazi lungahle lubandakanye inombolo yakho kamazisi yomsebenzisi wasepulatifomu, okuyo iwebhusayithi okuyo, nokuningi. Ukusebenzisana ne-Plug-in kuzodlulisa imininingwane ngqo kuleyo nethiwekhi yomphakathi ye-Plug-in futhi leyo mininingwane ingabonakala kwabanye kuleyo ndawo. Ama-plug-in alawulwa yinqubomgomo yobumfihlo yeplatifomu efanelekile, hhayi Inqubomgomo yethu.
Ozakwethu kanye nababambisene nabo. Singadalula imininingwane koxhumana nabo, ophathina bebhizinisi, kanye nezinkampani zangaphandle (isb. Abathengisi, abakhangisi, ama-ejensi esikhangiso, amanethiwekhi wokukhangisa nezinkundla, izinhlangano zocwaningo, nezinye izinkampani) imikhuba yazo engavunyelwe yile Nqubomgomo Yemfihlo, futhi lokho kunganikeza banikela, bathuthukise, bathengise, futhi ngenye indlela baxhumane nawe ngemikhiqizo yabo kanye nezinsizakalo. Ukuze ufunde kabanzi mayelana nezinketho zakho, sicela ubone Izinketho Zakho ngezansi. Singabelana ngolwazi oluthile nabantu besithathu ukukunikeza ukukhangisa kuwe ngokuya ngentshisekelo yakho. Ngeminye imininingwane, sicela ubheke Izinketho zesikhangiso ngezansi.
Abaxhasi nokwenyusa ngokubambisana. Kwesinye isikhathi sinikela ngokuqukethwe noma ngezinhlelo (isb., Imincintiswano, ama-sweepstake, ukukhushulwa, noma ukuhlanganiswa kweSocial Media Site) axhaswe noma afakwe uphawu lwenkampani yangaphandle. Ngenxa yalobu budlelwano, abantu besithathu baqoqa noma bathola imininingwane kuwe lapho ubamba iqhaza kulo msebenzi. Asinakulawula ukusetshenziswa kwalaba bantu besithathu lolu Lwazi. Sikukhuthaza ukuthi ubheke ukuvezwa kobumfihlo kwanoma yimuphi umuntu wesithathu ukuze ufunde ngemikhuba yabo yedatha ngaphambi kokubamba iqhaza kulo msebenzi.
Izinhloso Zokuqinisa Umthetho Nezomthetho. Singadalula imininingwane ngokuphendula inqubo yezomthetho, isibonelo ekuphenduleni umyalo wenkantolo noma isamanisi, noma ngokuphendula isicelo se-ejensi yokuphoqelela umthetho. Singadalula futhi leyo mininingwane kubantu besithathu: (i) ngezinhloso zokuvikela ukukhwabanisa nokunciphisa ubungozi besikweletu, (ii) lapho sikholwa ukuthi kunesidingo sokuphenya, ukuvimbela noma ukuthatha izinyathelo mayelana nezinto ezingekho emthethweni, (iii) ukuphoqelela amalungelo ethu avela kunoma yiziphi izinkontileka ezifakwe phakathi kwakho nathi, kufaka phakathi Imigomo Yokusebenzisa, le Nqubomgomo, kanye nokubhila nokuqoqa, (iv) uma sikholwa ukuthi ukudalulwa kuyadingeka noma kufanelekile ukuvikela amalungelo ethu, impahla yethu, noma ukuphepha noma lokho yamakhasimende ethu, abasebenzisi, osonkontileka noma abanye, (v) njengoba kufunwa ngenye indlela ngumthetho.
Ukuxhumana Kwezokumaketha nokwabelana namaqembu wesithathu. Ungabuyekeza okuncamelayo maqondana nokuthola ukuxhumana okuthile kokukhangisa okuvela kithi, nokwabelana kwethu ngolwazi lomuntu siqu nabantu besithathu. Ungakwenza lokho ngokuxhumana nathi ku- privacy@astroshopee.org . Ungase futhi uphume ekutholeni ukuxhumana kwezokumaketha nge-imeyili, ngokulandela imiyalo 'yokuzikhipha ohlwini' enikezwe kuwo wonke ama-imeyili owathola kithi. Ungase futhi ulungise izaziso zakho zohlelo lokusebenza kudivayisi yakho yeselula ngokusebenzisa izilungiselelo zakho zedivayisi noma zohlelo lokusebenza.
Izinketho zesikhangiso. Singasebenza nabantu besithathu ukwethula izikhangiso, futhi sihlanganyele ekuqoqweni kwedatha, ekubikeni, ekuhlaziyweni kwesayithi, ukulethwa kwezikhangiso nokukalwa kwempendulo kwiSayithi lethu nakumawebhusayithi wesithathu nezinhlelo zokusebenza ngokuhamba kwesikhathi. Lezi zinkampani zangaphandle zingasebenzisa amakhukhi, ama-web beacons, amaphikseli, nobunye ubuchwepheshe obufanayo ukwenza lo msebenzi. Bangaphinde bathole imininingwane ngamawebhusayithi owavakashelayo, izinhlelo ozisebenzisayo, nolunye ulwazi oluvela kuzo zonke iziphequluli zakho namadivayisi ukuze wethule ukukhangisa okungase kwenzelwe izintshisekelo zakho ngaphakathi nangaphandle kweSayithi lethu nakwamanye amapulatifomu. Lolu hlobo lokukhangisa lwaziwa njengokukhangisa okususelwa kuntshisekelo.
Ngeminye imininingwane mayelana nokukhangisa okususelwa kuntshisekelo kudeskithophu yakho noma isiphequluli seselula, kanye namandla akho wokukhetha ukuphuma kulolu hlobo lokukhangisa ngabantu besithathu, sicela uvakashele i- Initiative Network Advertising Initiative kanye / noma ne-DAA Uhlelo Lokuzilawula Lokukhangisa Ngokuziphatha Kwe-inthanethi . Ukuze ufunde kabanzi ngokukhangisa okususelwa kuntshisekelo kuzinhlelo zokusebenza zeselula nokuthi ungakhetha kanjani ukuphuma kulolu hlobo lokukhangisa ngabantu besithathu, ungavakashela AppChoices . Sicela wazi ukuthi noma ikuphi ukukhetha ongakusebenzisa ngalezi zinhlelo kuzosebenza kuphela ekukhangisweni okususelwa kuntshisekelo ngabantu besithathu obakhethayo kepha kusazovumela ukuqoqwa kwedatha kwezinye izinhloso, njengezibalo, ucwaningo, nokusebenza. Ungaqhubeka nokuthola ukukhangisa, kepha lokho kukhangisa kungahle kungahlobene nezintshisekelo zakho.
Amalungelo wobumfihlo eCalifornia. ICalifornia Civil Code Isigaba 1798.83 sivumela abasebenzisi beSayithi lethu abangabahlali baseCalifornia ukuthi bacele imininingwane ethile maqondana nokudalulwa kwethu kwemininingwane yomuntu siqu kubantu besithathu ngezinjongo zabo zokuthengisa ngqo. Ukuze wenze isicelo esinjalo, sicela uxhumane nathi ku- privacy@astroshopee.org .
INQUBOMGOMO YOKUPHEPHA (NGAPHANDLE kwe-EU)
Amakhukhi nobunye ubuchwepheshe. Thina, kanye nabasebenzisana nathi, abahlinzeki benkampani yangaphandle, kanye nabalingani bebhizinisi singathumela 'amakhukhi' kwikhompyutha yakho noma basebenzise ubuchwepheshe obufanayo ukuthuthukisa ulwazi lwakho lwe-inthanethi eSizeni sethu nangokukhangisa kwethu nabezindaba kwi-Intanethi nakuzinhlelo zokusebenza zeselula.
Amakhukhi amafayili wombhalo amancane aqukethe imininingwane elandelwa kudivayisi yakho lapho uvakashela iwebhusayithi, kufaka phakathi iSayithi lethu. Amakhukhi abese ebuyiselwa emuva kusizinda sewebhu ekuvakasheni kwakho okulandelayo kuleso sizinda. Iningi lamakhasi ewebhu aqukethe izinto ezivela ezizindeni eziningi zewebhu ngakho-ke lapho uvakashela iwebhusayithi, isiphequluli sakho singathola amakhukhi emithonjeni eminingana. Amakhukhi ayasebenziseka ngoba avumela iwebhusayithi ukuthi ibone idivayisi yomsebenzisi. Amakhukhi akuvumela ukuthi uzulazule kumawebhusayithi kahle, khumbula okuncamelayo futhi ngokujwayelekile uthuthukise ulwazi lomsebenzisi. Zingasetshenziselwa ukuvumelanisa ukukhangisa nezintshisekelo zakho ngokulandela ukuphequlula kwakho kuwo wonke amawebhusayithi. Amakhukhi eseshini asuswa ngokuzenzakalela lapho uvala isiphequluli sakho futhi amakhukhi aqhubekayo ahlala kudivayisi yakho ngemuva kokuthi isiphequluli sivaliwe (isb.ukukhumbula okuncamelayo komsebenzisi lapho ubuyela eSizeni).
Singasebenzisa futhi amaphikseli noma 'ama-web beacons' aqapha ukusetshenziswa kwakho kweSayithi lethu. Ama-web beacon amafayili amancane kagesi ahlanganiswe neSayithi noma ukuxhumana kwethu (isb. Ama-imeyili) asivumelayo, ngokwesibonelo, ukubala abasebenzisi abavakashele lawo makhasi noma abavule i-imeyili noma ezinye izibalo ezihlobene. Futhi singahlanganisa 'ama-Software Development Kits' ('SDKs') ezinhlelweni zethu zokusebenza ukwenza imisebenzi efanayo njengamakhukhi namabhikhoni ewebhu. Isibonelo, ama-SDK angaqoqa imininingwane yezobuchwepheshe neyokusetshenziswa njengezikhombi zamadivayisi weselula nokuxhumana kwakho neSayithi nezinye izinhlelo zokusebenza zeselula.
Singasebenzisa amakhukhi nobunye ubuchwepheshe ukusiza ukubona isiphequluli sakho noma idivayisi, ukugcina okuncamelayo, ukuhlinzeka ngezici ezithile zeSayithi, nokuqoqa imininingwane mayelana nokusebenzisana neSayithi lethu, okuqukethwe kwethu, kanye nokuxhumana kwethu.
Singahle futhi sisebenzise amakhukhi nobunye ubuchwepheshe (i) ukuhlinzeka, ukuthuthukisa, ukugcina, ukwenza ngezifiso, ukuvikela, nokwenza ngcono iSayithi lethu, imikhiqizo, izinhlelo, nezinsizakalo nokuqhuba ibhizinisi lethu, (ii) ukwenza i-analytics, kufaka phakathi ukuhlaziya kanye bika ngokusetshenziswa nokusebenza kweSayithi lethu nezinto zokwazisa, (iii) ukuvikela, ukukhomba, nokuvimbela ukukhwabanisa kanye nezinye izinto ezingekho emthethweni, (iv) ukudala idatha ehlanganisiwe mayelana namaqembu noma imikhakha yabasebenzisi bethu, (v) ukuvumelanisa abasebenzisi kuwo wonke amadivayisi, abaxhumana nabo, ozakwethu bebhizinisi, bese ukhetha izinkampani zangaphandle, futhi (vi) kithina nakwizinhlangano esisebenzisana nabo, ozakwethu bebhizinisi, bese ukhetha izinkampani zangaphandle ukukhomba, ukunikela, noma ukuthengisa, imikhiqizo, izinhlelo, noma amasevisi. Amakhukhi nobunye ubuchwepheshe busiza futhi balinganise ukusebenza kwezikhangiso eziboniswe noma ezilethwe ngathi noma ngathi noma / noma amanye amanethiwekhi noma amasayithi. Ngokuvakashela iSayithi, noma ngabe ungumsebenzisi obhalisiwe noma ngenye indlela, uyavuma, futhi uyavuma ukuthi usinika imvume yakho yokulandela imisebenzi yakho nokusebenzisa kwakho iSayithi ngobuchwepheshe obuchazwe ngenhla, kanye nobuchwepheshe obufanayo obuthuthukiswe ngokuzayo , nokuthi singasebenzisa lobu buchwepheshe bokulandela ngomkhondo kuma-imeyili esikuthumela wona.
Ungahle ulungise isiphequluli sakho ukuthi senqabe amakhukhi. Ukulawula amakhukhi ngezilawuli zesiphequluli kungenzeka kunganciphisi ukusebenzisa kwethu obunye ubuchwepheshe. Sicela uthinte izilungiselelo zesiphequluli sakho ukuthola eminye imininingwane. Noma kunjalo, ukuvimba amakhukhi noma ubuchwepheshe obufanayo kungakuvimbela ekufinyeleleni kokunye okuqukethwe kwethu noma izici ezikusayithi. Njengamanje asiziphenduli izimpawu ze-Do Not Track ngoba indinganiso yezobuchwepheshe efanayo ayikenziwa. Siyaqhubeka nokubuyekeza ubuchwepheshe obusha futhi singaqala ukusebenzisa indinganiso uma sekudaliwe eyodwa.
Ukuphatha amakhukhi nobunye ubuchwepheshe
Amakhukhi Ayadingeka Ngokuqinile
Lawa makhukhi abalulekile ukuze ukwazi ukujikeleza iSayithi futhi usebenzise izici zalo. Ngaphandle kwalawa makhukhi, izinsizakalo ozicele (njengokuzula phakathi kwamakhasi) azikwazi ukunikezwa. Uhlu olulandelayo lubeka ezinye izibonelo zalezi zinhlobo zamakhukhi:
Umthombo wamakhukhi: astroshopee.com
Sisebenzisa idatha egcinwe kule khukhi ukuphathwa kwesistimu, ukuthuthukisa ukuphepha, nokunikeza ukufinyelela kokusebenza okudingekayo kusayithi
Imininingwane Eyengeziwe: Ikhukhi leseshini (liphelelwa isikhathi lapho isiphequluli sivaliwe)
Sisebenzisa amakhukhi wokuhlaziya ukuhlaziya ukuthi izivakashi zethu zisebenzisa kanjani iSayithi nokuqapha ukusebenza kwazo. Lokhu kusivumela ukuthi sinikeze umuzwa wekhwalithi ephezulu ngokwenza ngezifiso ukunikezwa kwethu futhi sikhombe ngokushesha futhi silungise noma yiziphi izinkinga ezivelayo. Isibonelo, singasebenzisa amakhukhi wokusebenza ukugcina ithrekhi ukuthi imaphi amakhasi athandwa kakhulu, iyiphi indlela yokuxhumanisa phakathi kwamakhasi esebenza kakhulu, nokuthola ukuthi kungani amanye amakhasi athola imilayezo yamaphutha. Singahle futhi sisebenzise lawo makhukhi ukugqamisa izindatshana noma izinsizakalo zeSayithi esicabanga ukuthi zizoba nentshisekelo kuwe ngokususelwa ekusebenziseni kwakho iSayithi. Imininingwane eqoqwe yilawa makhukhi ayihlotshaniswa nemininingwane yakho ephathelene nathi noma osonkontileka bethu futhi isetshenziswa kuphela kwifomu ehlanganisiwe nengaqondakali. Uhlu olulandelayo lubeka ezinye izibonelo zalezi zinhlobo zamakhukhi:
Umthombo wamakhukhi: I-Google Analytics
Lawa makhukhi asetshenziselwa ukuqoqa imininingwane yokuthi izivakashi zisebenzisa kanjani isayithi lethu. Sisebenzisa imininingwane ukuhlanganisa imibiko nokusisiza sithuthukise isiza sethu. Amakhukhi aqoqa imininingwane ngendlela engaziwa, kufaka phakathi inani lezivakashi eziya kusayithi, lapho izivakashi zize khona kusayithi kusuka nasemakhasini abavakashele.
Chofoza lapha ukuthola inqubomgomo yobumfihlo ye-Google maqondana ne-Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Ungakhetha ukuphuma ekulandeleni nge-Google Analytics ngokuvakashela: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Umthombo wamakhukhi: Ukuhamba kwemouse
Sisebenzisa iMouseflow ukuthatha imininingwane yomsebenzisi engaziwa ukuthi izivakashi zesayithi zixhumana kanjani nezinto zekhasi. Sisebenzisa le datha engaziwa ukuletha impendulo ngomuzwa wesayithi othuthukisiwe wabasebenzisi.
Chofoza lapha ukuze ubone Inqubomgomo Yobumfihlo yeMouseflow: http://mouseflow.com/privacy/
Uma ungathanda ukuphuma, ungakwenza lokho ku-https: //mouseflow.com/opt-out.
Sisebenzisa amakhukhi ukukunikeza ukusebenza okuthile. Isibonelo, ukubuka okuqukethwe kwevidiyo, ukusakazwa bukhoma, noma ukukhumbula izinqumo ozenzayo nokunikeza ngezici ezithuthukisiwe nezengeziwe zomuntu siqu. Lawa makhukhi awasetshenziswanga ukulandelela ukuphequlula kwakho kwamanye amasayithi. Uhlu olulandelayo lubeka ezinye izibonelo zalezi zinhlobo zamakhukhi:
Umthombo wamakhukhi: Usesho lwe-Google Ajax
Le khukhi ihlinzeka ngesici se-typehead esitholakala kumigoqo kuyo yonke iSayithi. Lokhu kunikeza iziphakamiso zamagama asemqoka futhi kusiza ukucwenga imibuzo yokusesha.
Ikhukhi leseshini (liphelelwa isikhathi lapho isiphequluli sivaliwe)
Amakhukhi wokukhangisa (noma amakhukhi okukhomba) aqoqa imininingwane mayelana nemikhuba yokuphequlula ehambisana nedivayisi yakho futhi isetshenziselwa ukwenza ukukhangisa kuhambisane kakhulu nawe nezintshisekelo zakho. Lawa makhukhi abuye alinganise ukusebenza kwemikhankaso yokukhangisa futhi alandele ukuthi izikhangiso zikhonjiswe kahle yini. Uhlu olulandelayo lubeka ezinye izibonelo zalezi zinhlobo zamakhukhi:
Umthombo wamakhukhi: DoubleClick
I-DoubleClick isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ukukhangisa. Ezinye izinhlelo zokusebenza ezijwayelekile ukukhomba ukukhangisa okususelwa kokuhlobene nomsebenzisi, ukuthuthukisa ukubikwa ngokusebenza komkhankaso, nokugwema ukubonisa izikhangiso umsebenzisi asezibonile.
Chofoza lapha ukuthola inqubomgomo yobumfihlo ye-Google maqondana ne-DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=zu
Ungakhetha ukuphuma ekulandeleni nge-DoubleClick ngokuvakashela ku-https: //support.google.com/ads/answer/2662922?hl=zu
Umthombo wamakhukhi: Facebook Pixel
Sisebenzisa i-pixel ye-Facebook njengendlela yokuqonda kangcono abasebenzisi bethu, ukwenza ngokwezifiso okuqukethwe nokukhangisa, ukuhlinzeka ngezici zokuxhumana nabantu nokuhlaziya ithrafikhi eya kusayithi. Imininingwane eqoqiwe ihlala ingaziwa. Lokhu kusho ukuthi asikwazi ukubona idatha yomuntu siqu yanoma yimuphi umsebenzisi ngamunye. Noma kunjalo, idatha eqoqiwe igcinwa futhi icutshungulwe yi-Facebook.
I-Facebook iyakwazi ukuxhuma idatha ne-akhawunti yakho ye-Facebook futhi isebenzise idatha ngezinjongo zazo zokukhangisa, ngokuya ngenqubomgomo yabo yobumfihlo etholakala ngaphansi kwe: https://www.facebook.com/about/privacy/
Uma ungathanda ukuphuma, ungakwenza lokho ku-https: //www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Amakhukhi wokukhangisa angasetshenziswa ngamasayithi wezokuxhumana axhumene neSayithi lethu, njengezinkinobho 'zokwabelana' noma izidlali zomsindo / zevidiyo ezishumekiwe. Lawa makhukhi ahlinzeka ngokusebenza okuceliwe. Amasayithi anjalo ezokuxhumana abeka phansi amakhukhi wokukhangisa uma uvakashela iSayithi lethu nalapho usebenzisa izinsizakalo zabo futhi uzulazula kude neSayithi lethu. Izindlela zokwenza amakhukhi ezinye zalezi zingosi zokuxhumana zibekwe ngezansi:
Inqubomgomo Yekhukhi ye-Facebook
Inqubomgomo ye-Cookie ye-Twitter
Inqubomgomo yekhukhi ye-Instagram
Inqubomgomo Yamakhukhi kaPinterest
Inqubomgomo Yamakhukhi yakwa-YouTube
Inqubomgomo ye-SoundCloud Cookie
Inqubomgomo ye-Google Plus Cookie
UKUFINYELELA, UKULUNGISA NOKUSUSA IMINININGWANE YAKHO
Ukubuza imininingwane yomuntu esiyiqoqe mayelana nawe ku-inthanethi kusuka eSizeni lapho le Nqubomgomo Yobumfihlo ithunyelwe khona noma ukulungisa leyo mininingwane yomuntu, ungasithumela i-imeyili ku privacy@astroshopee.org . Ungacela futhi uthole ukususwa Kweminikelo Yakho Yomsebenzisi ngokuthumela i-imeyili privacy@astroshopee.org ngesicelo sakho futhi ucacisa umnikelo othile womsebenzisi ofuna ukuwususa. Angeke samukele isicelo sokushintsha noma sokususa noma yiluphi ulwazi uma sikholwa ukuthi isenzo esinjalo sizokwephula noma imuphi umthetho noma imfuneko yezomthetho noma sidale ukuthi ulwazi lungalungile. Ukususwa Kweminikelo Yakho Yomsebenzisi eSizeni akuqinisekisi ukususwa okuphelele noma okuphelele kwaleyo Minikelo Yomsebenzisi eSizeni njengoba amakhophi angahlala ebukeka emakhasini afakwe kunqolobane noma afakwe kungobo yomlando noma kungenzeka ukuthi akopishwa noma agcinwa abanye abasebenzisi beSayithi. Ungazikhipha ohlwini kunoma iziphi izincwadi zezindaba noma ama-imeyili ahlukahlukene wokuphromotha nganoma yisiphi isikhathi ngokuchofoza izixhumanisi 'zokuzikhipha ohlwini' ezinikezwe kulokho kuxhumana. Ngeke ukwazi ukuphuma ekuxhumaneni okuhlobene neSayithi, njengokuqinisekiswa kwe-akhawunti, iziqinisekiso zokuthenga nemiyalezo yokuphatha, inqobo nje uma ubhaliswe neSayithi.
Ukucubungula imininingwane yakho
Isiza sisingathwa e-United States. Singakhawulela ukutholakala kweSayithi noma iyiphi insizakalo noma umkhiqizo ochazwe eSizeni kunoma yimuphi umuntu noma endaweni ethile nganoma yisiphi isikhathi. Uma ukhetha ukungena eSizeni ungaphandle kwe-United States, wenza kanjalo ngokuzibeka wena engcupheni.
Sisebenzise izindlela ezifanele zobuchwepheshe nezenhlangano zokuphepha kweSayithi. Ngeshwa, ukudluliswa kolwazi nge-Intanethi nangamapulatifomu weselula akuphephile ngokuphelele. Yize sithatha izivikelo ezizwakalayo ukuvikela imininingwane yakho, asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha kwemininingwane yakho yangasese. Noma ikuphi ukudluliswa kolwazi lomuntu siqu nge-Intanethi kungazibeka engcupheni yakho. Asinasibopho sokugwema noma yiziphi izilungiselelo zobumfihlo noma izinyathelo zokuphepha esizinikezayo. Ukuphepha nokuphepha kolwazi lwakho nakho kuncike kuwe. Lapho sikunike khona (noma lapho ukhethe khona) iphasiwedi yokufinyelela ezingxenyeni ezithile zeSayithi lethu, unesibopho sokugcina le phasiwedi iyimfihlo. Akufanele wabelane ngephasiwedi yakho nanoma ubani.
IZINGUQUKO KUMGOMO WETHU
Singavuselela Inqubomgomo yethu ngezikhathi ezithile. Sizokwazisa nganoma yiziphi izinguquko ezibonakalayo kule Nqubomgomo Yobumfihlo ngokubeka isaziso kuSayithi lethu. Sikukhuthaza ukuthi ngezikhathi ezithile uhlole futhi ubuyekeze le Nqubomgomo ukuze wazi noma yiziphi izinguquko zakamuva.
INDLELA XHUMANA NATHI
Ukukhathazeka Kobumfihlo. Uma unanoma ikuphi ukukhathazeka noma isikhalazo mayelana nobumfihlo eSizeni, sicela uxhumane nathi eastroshopee Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood , CA, 90069, USA noma usithumele i-imeyili ku privacy@astroshopee.org . Sizokwenza konke okusemandleni ukuphendula kuwe ngesikhathi esifanele nangendlela efanelekile ukuze siphendule imibuzo yakho futhi sixazulule izinto ezikukhathazayo. © astroshopee Digital Media, LLC. Wonke Amalungelo Agodliwe. IPurpleclover ne-Purpleclover.com yizimpawu zokuhweba zeastroshopee Digital Media, LLC
ISAZISO SOKUYIMFIHLO KWABAHLALI BASE-CALIFORNIA
Kugcine ukubuyekezwa: Januwari 1, 2020
Lesi SAZISO SOKUYIMFIHLO KWABAHLALI BASE-CALIFORNIA sengeza imininingwane equkethwe yile Nqubomgomo Yobumfihlo futhi sisebenza kuphela kubavakashi, abasebenzisi, nakwabanye abahlala e-State of California ('abathengi' noma 'wena'), futhi sinikezela ngolwazi maqondana namalungelo abathengi ngaphansi kwe- Umthetho Wobumfihlo Wabathengi waseCalifornia ka-2018 ('CCPA') neminye imithetho yobumfihlo yaseCalifornia. Noma yimiphi imigomo echazwe ku-CCPA inencazelo efanayo lapho isetshenziswa kulesi saziso.
IMINININGWANE YOMUNTU SIYAYIQOQA
Siqoqa ulwazi olukhomba, oluphathelene, oluchaza, olukhomba, olukwazi ukuhlanganiswa, noma lungaxhunywa ngokunengqondo, noma ngokungaqondile, nomthengi noma ithuluzi elithile ('imininingwane yomuntu'). Ikakhulu, sesiqoqe le mikhakha yolwazi lomuntu siqu mayelana nabathengi ezinyangeni eziyishumi nambili (12) ezedlule:
I-inthanethi noma omunye umsebenzi wenethiwekhi ofanayo (njengomlando wokuphequlula)
Idatha yesikhombi sendawo (okufana nendawo eqondile yedivayisi yakho)
Imininingwane yomuntu ayifaki:
Imininingwane etholakala emphakathini evela kumarekhodi kahulumeni.
Imininingwane yomthengi ekhonjwe noma ehlanganisiwe.
Imininingwane ekhishwe esikalini seCCPA, njenge:
imininingwane yezempilo noma yezokwelapha embozwe yi-Health Insurance Portability and Accountability Act ka-1996 (HIPAA) kanye neCalifornia Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) noma idatha yesivivinyo somtholampilo;
imininingwane yomuntu embozwe yimithetho ethile yobumfihlo eqondene nomkhakha othile, kufaka phakathi i-Fair Credit Reporting Act (FRCA), i-Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) noma i-California Financial Information Privacy Act (FIPA), kanye ne-Driver's Privacy Protection Act ka-1994.
Singaqoqa ngokuzenzakalela imininingwane ethile yezobuchwepheshe nokusetshenziswa lapho usebenzisa iSayithi lethu noma uxhumana nezikhangiso zethu eziku-inthanethi nokuqukethwe, okufana nohlobo lwedivayisi, isiphequluli, kanye nohlelo olusebenzisayo, isihlonzi sedivayisi esihlukile, ikheli le-IP, izilungiselelo zedivayisi neziphequluli , amakhasi ewebhu owavakashelayo, imininingwane yokuthi uxhumana kanjani neSayithi lethu kanye nalabo esisebenzisana nabo abavela eceleni (njengamaphi amakhasi owavakashelayo), kanye nolwazi olusivumela ukuthi siqaphele futhi sihlanganise umsebenzi wakho kuwo wonke amadivayisi namawebhusayithi. Singabona idivayisi yakho ukukunikeza okuhlangenwe nakho okwenzelwe wena nokukhangisa kuwo wonke amadivayisi owasebenzisayo.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi izinkampani ezithile zibeka ubuchwepheshe bokulandela umkhondo njengamakhukhi eSizeni sethu esivumela lezo zinkampani ukuthi zithole imininingwane ngomsebenzi wakho kuSayithi lethu elihlotshaniswa nesiphequluli sakho noma idivayisi. Bona okwethu Inqubomgomo Yamakhukhi (Ngaphandle kwe-EU) ngenhla ukuthola eminye imininingwane ngokulandela ngeSayithi lethu nokuthi singabusebenzisa kanjani lobu buchwepheshe ukuqoqa lolu lwazi. Lezi zinkampani zingasebenzisa leyo datha ukwenza ngezifiso okuqukethwe kwakho futhi zikunikeze izikhangiso ezifanelekile kwiSayithi lethu noma kwabanye, egameni lethu nangenxa yabanye abakhangisi. Uma wenza isicelo sokukhetha ukuphuma, futhi ungathanda ukuphuma ekulandeleleni okususelwa kumakhukhi ngezinjongo zokukhangisa, sicela wazi ukuthi uzodinga ukuhlukanisa izilungiselelo zesiphequluli sakho bese usetha okuncamelayo njengoba kuchaziwe Inqubomgomo Yamakhukhi (Ngaphandle kwe-EU) ngenhla.
Ungahle ukwazi ukufinyelela kuzici zeSayithi ngemiphakathi, izinkundla zokuxhumana, nezindawo zokuxhumana, izinsiza, ama-plug-ins, kanye nezinhlelo zokusebenza ezenziwa abahlinzeki bezokuxhumana ('Social Media Sites'). Amasethingi akho obumfihlo kulawo maSayithi ezeMidiya Yezenhlalo, kanye nezinqubomgomo zawo zobumfihlo, azonquma ulwazi lomuntu siqu nolunye olungabiwa nathi, noma olutholwe yithi, ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokulandela umkhakha wezokuxhumana lapho ufinyelela eSizeni, futhi eqoqwe futhi yasetshenziswa yilezi Zindawo Zokuxhumana. Lapho kuvunyelwe ngumthetho, ngokunikeza lolu Lwazi noma ngenye indlela ukuxhumana neSayithi lethu ngeSayithi Yezokuxhumana, uyavuma ukusetshenziswa kwethu kolwazi oluvela eSocial Media Site ngokuya ngale Nqubomgomo Yobumfihlo.
Imininingwane Yendawo. Siqoqa imininingwane emayelana nendawo okuyo njengezwe lakho noma ikheli lakho le-IP. Siqoqa indawo enembile yedivayisi yakho lapho ungena eSizeni ngedivayisi yakho yeselula. Akuyona yonke le mininingwane egciniwe, futhi akuyona yonke le mininingwane exhumeka kuwe.
Sisebenzisa imininingwane yomuntu ngezinhloso ezichazwe kule nqubomgomo noma ezidalulwe ngesikhathi sokuqoqa noma ngemvume yakho, kufaka phakathi lezi zinhloso ezilandelayo:
Nikeza, thengisa, futhi ukhangise imikhiqizo, izinhlelo, nezinsizakalo ezivela kithi nakwabasebenzisana nathi, kanye nabalingani bebhizinisi abangaba nentshisekelo kuwe. Singahle futhi sisebenzise imininingwane esiyiqoqayo ukukhombisa izikhangiso kuzithameli eziqonde ngqo kubakhangisi bethu.
Qinisekisa ubuwena bakho maqondana nezicelo zeCCPA ezenziwe ngezansi.
IMITHOMBO ESILANDELA NGAYO Imininingwane Yakho
Siqoqa imininingwane yomuntu uqobo kusuka kumadivayisi akho. Sisebenzisa amathuluzi okulandela umkhondo ukuqoqa imininingwane lapho usebenzisa noma uxhumana neSayithi, izikhangiso zethu nokuqukethwe okuku-inthanethi, nama-imeyili ethu.
Singase siqoqe imininingwane yomuntu siqu kusuka kulwazi olutholakala esidlangalaleni.
Sithola imininingwane yomuntu kusuka kubaphakeli esibaqashile ukuze basisebenzele. Isibonelo, abathengisi abasingatha noma abagcina amawebhusayithi ethu futhi basithumelele ama-imeyili wokuphromotha bangasinika imininingwane.
Singathola imininingwane yomuntu siqu kwamanye amaqembu, njengalapho abalingani bokumaketha ngokuhlanganyela noma amanethiwekhi wokukhangisa abelana ngolwazi nathi. Singathola nemininingwane evela kumaSocial Media Sites, njengoba kuchaziwe ngenhla.
SIYABELA KANJANI SIDLULA IMINININGWANE YAKHO
Singadalula imininingwane yakho yangasese kwabanye abantu ngenhloso yebhizinisi lethu. Ezinyangeni eziyishumi nambili (12) ezandulele, sidalule isigaba semininingwane elandelayo ngezinhloso zethu zebhizinisi:
Singadalula isigaba esingenhla semininingwane yomuntu ngezinjongo zebhizinisi lethu kule mikhakha elandelayo yamaqembu:
Abantu besithathu wena noma abenzeli bakho abasigunyaza ukuthi sidalule imininingwane yakho ephathelene nemikhiqizo noma izinsizakalo esikunikeza zona.
Ezinyangeni eziyishumi nambili (12) ezedlule, asizange sithengise noma imiphi imininingwane yomuntu ngokuqonda kwethu iCCPA. Inkampani ngeke ithengise imininingwane yakho yangomuso ngokuzayo, ngokuqonda kwethu i-CCPA, ngaphandle kokukunikeza isaziso futhi ikunikeze nethuba lokuphuma ngaleso sikhathi.
AMALUNGELO NOKUKHETHA KWAKHO
I-CCPA inikeza abathengi (abahlali baseCalifornia) amalungelo athile maqondana nemininingwane yabo. Lesi sigaba sichaza amalungelo akho e-CCPA futhi sichaza nokuthi ungawasebenzisa kanjani lawo malungelo.
Ukutholakala Kwamalungelo Akhethekile Namalungelo Wokuphatheka Kwedatha
Unelungelo lokucela ukuthi sidalule imininingwane ethile kuwe mayelana nokuqoqwa kwethu nokusetshenziswa kwemininingwane yakho ezinyangeni eziyi-12 ezedlule. Uma sesithole futhi saqinisekisa isicelo sakho somthengi, sizokudalula okunye noma konke okulandelayo ngokuya ngesicelo sakho:
Izingcezu ezithile zolwazi lomuntu siqu esiziqoqile mayelana nawe (ezibizwa nangokuthi isicelo sokuthwala idatha).
Izigaba zolwazi lomuntu siqu esiziqoqe ngawe.
Izigaba zemithombo yolwazi lomuntu siqu esiyiqoqe ngawe.
Inhloso yethu yebhizinisi noma yezohwebo yokuqoqa noma ukuthengisa leyo mininingwane yomuntu.
Izigaba zamanye amaqembu esabelana nawo lolo lwazi lomuntu siqu.
Uma sithengise noma siveze imininingwane yakho yangasese ngenhloso yebhizinisi, uhlu olwehlukene olwembulayo:
ukuthengisa, ukukhomba imikhakha yolwazi lomuntu siqu ethengwe isigaba ngasinye somamukeli; futhi
ukudalulwa ngenhloso yebhizinisi, ukukhomba imikhakha yolwazi lomuntu siqu etholwe isigaba ngasinye somamukeli.
Unelungelo lokucela ukuthi sisuse noma imiphi imininingwane yakho esiyiqoqe kuwe sayigcina, ngokuya ngokuhlukile okuthile. Lapho nje sesitholile futhi siqinisekisa isicelo sakho somthengi, sizosusa (futhi siqondise abahlinzeki bethu bezinsizakalo ukuthi basuse) imininingwane yakho kumarekhodi ethu, ngaphandle kwalapho kusebenza okuhlukile.
Ukusebenzisa Ukufinyelela, Ukuphatheka Kwedatha, Namalungelo Okususa
Ukuze usebenzise ukufinyelela, ukuphatheka kwedatha, namalungelo okususa achazwe ngenhla, sicela uthumele isicelo somthengi kithi ngokulandelayo:
Ukusishayela ku: 1-866-522-5025
Kuthumela i-imeyili ku-: privacy@astroshopee.org
Wena kuphela noma umuntu omgunyaze ukuba akwenzele, ongenza isicelo somthengi esihlobene nolwazi lwakho lomuntu siqu.
Ungenza kuphela isicelo somthengi sokufinyelela noma ukuphatheka kwedatha kabili esikhathini esiyizinyanga eziyi-12. Isicelo somthengi kufanele:
Nikeza ikheli le-imeyili elivumelekile, inombolo yocingo, ikheli noma olunye ulwazi olwanele olusivumela ukuthi sikuqinisekise ngokunengqondo ukuthi ungumuntu esiqoqe imininingwane yomuntu uqobo noma ummeleli ogunyaziwe.
Chaza isicelo sakho ngemininingwane eyanele esivumela ukuthi siyiqonde kahle, siyivivinye futhi siyiphendule.
Asikwazi ukuphendula isicelo sakho noma ukukunikeza imininingwane yakho uma singeke sikwazi ukuqinisekisa ubuwena noma igunya lommeleli wakho lokwenza isicelo nokuqinisekisa imininingwane yakho ephathelene nawe. Ukwenza isicelo somthengi akudingi ukuthi udale i-akhawunti nathi. Sizosebenzisa kuphela imininingwane yomuntu ehlinzekwe kwisicelo somthengi ukuqinisekisa ubunikazi bomceli noma igunya lokwenza isicelo.
Isikhathi Sokuphendula nefomethi
Sizama ukuphendula esicelweni somthengi esiqinisekisiwe zingakapheli izinsuku ezingama-45 sitholiwe. Uma sidinga isikhathi esithe xaxa (kufika ezinsukwini ezingama-90), sizokwazisa ngesizathu nangesikhathi eseluliwe ngokubhala. Uma une-akhawunti nathi, sizothumela impendulo yethu ebhaliwe kuleyo akhawunti. Uma ungenayo i-akhawunti nathi, sizothumela impendulo yethu ebhaliwe ngeposi noma nge-elektroniki, ngokuzikhethela kwakho. Noma ikuphi ukudalulwa esikunikezayo kuzobandakanya kuphela izinyanga eziyishumi nambili ezandulela ukwamukelwa kwesicelo. Impendulo esiyinikezayo izophinda ichaze izizathu esingenakukwazi ukuthobela isicelo, uma kudingeka. Ngezicelo zokuphatheka kwedatha, sizokhetha ifomethi yokunikeza imininingwane yakho ephathekayo esetshenziswayo kalula futhi okufanele ikuvumele ukuthi udlulisele imininingwane kusuka kwelinye ibhizinisi iye kwelinye ibhizinisi ngaphandle kwesithiyo.
Izinguquko kusaziso sethu sobumfihlo
Sinelungelo lokuchibiyela lesi saziso sobumfihlo ngokuthanda kwethu noma ngasiphi isikhathi. Lapho senza izinguquko kulesi saziso sobumfihlo, sizokwazisa ngesaziso ekhasini lethu eliyisiqalo lewebhusayithi yethu.
Uma unanoma yikuphi ukukhathazeka noma isikhalazo mayelana nobumfihlo eSizeni, izindlela esiqoqa futhi sisebenzise imininingwane yakho yomuntu siqu, izinketho zakho namalungelo akho mayelana nokusetshenziswa okunjalo, noma ufisa ukusebenzisa amalungelo akho ngaphansi komthetho waseCalifornia, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi kwaastroshopee Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Centre, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood, CA, 90069, USA, sithumele i-imeyili ku privacy@astroshopee.org noma ushayele ku-1-866-522-5025.
INQUBOMGOMO YOKUPHILA KWABASEBENZISI BE-EU
Iastroshopee Digital Media, LLC d / b / a astroshopee Industries, izinhlangano zayo eziphethwe kanye nezinkampani ezingaphansi kwayo ('astroshopee', 'we', 'us', noma 'yethu') iyabazisa ubumfihlo babasebenzisi bethu nababhalisile. Silwela ukungafihli lutho mayelana nokuthi siluqoqa futhi silusebenzise kanjani uLwazi lwakho (njengoba luchazwe ngezansi), ukugcina imininingwane yakho iphephile futhi sikunikeze nezinqumo ezizwakalayo. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ('Inqubomgomo') ichaza izinqubo zobumfihlo ze www.astroshopee.com iwebhusayithi ('iSayithi'), ephethwe, futhi esebenza, iphelele noma ingxenye yayo, yiastroshopee. Le Nqubomgomo ichaza ukuthi imininingwane yakho iqoqwa, isetshenziswe kanjani, futhi idalulwe kanjani yiastroshopee njengesilawuli sedatha.
Le Nqubomgomo isebenza emisebenzini yethu yolwazi eku-inthanethi yeSayithi maqondana nabasebenzisi abangaphakathi kwe-European Union. Le Nqubomgomo ayisebenzi kwidatha yomuntu siqu eqoqwe nganoma yimaphi amawebhusayithi noma izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni, kufaka phakathi amawebhusayithi ongawafinyelela ngeSayithi. Lawo mawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza zingaba nezinqubomgomo zazo zobumfihlo, esikukhuthaza ukuthi uzifunde ngaphambi kokunikeza noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu ngazo noma ngazo.
ama-aries nama-leo ahambisana nocansi
Indawo yethu isingathwa e-United States. Lokhu kusho ukuthi Ulwazi esiluqoqayo luzocutshungulwa yithi e-United States, izwe elinezinga eliphansi lokuvikelwa kwemininingwane yomuntu kune-European Union. Kodwa-ke, njengoba sinikela ngeSayithi lethu kanye nezinsizakalo kubahlali base-European Union, iastroshopee ngakho-ke futhi ingaphansi kwemithetho yaseYurophu yokuvikela imininingwane, ikakhulukazi i-EU General Data Protection Regulation (i-GDPR).
Iastroshopee isezinhlelweni zokuqoka ozomela i-EU futhi uzokwazisa ngohlobo olusha olusha lwale Nqubomgomo uma sekuqokwe omele i-EU.
Sisebenzisa okokusebenza okufana nezigaba ezijwayelekile zesivumelwano ngokuya nge-GDPR lapho sidlulisa<
Imininingwane yakho ngaphandle kwe-European Union noma kubantu besithathu Singahle futhi sikhawulele ukutholakala kweSayithi noma iyiphi insizakalo noma umkhiqizo ochazwe eSizeni kunoma yimuphi umuntu noma endaweni ethile nganoma yisiphi isikhathi.
IZINGANE ZINGAPHANSI KWEMINYAKA ENGU-16
Isiza asihloselwe izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-16 ubudala, futhi asiqoqi ulwazi lomuntu siqu ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-16. Uma sithola ukuthi siqoqe noma sathola imininingwane yomuntu siqu enganeni engaphansi kweminyaka engu-16 ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yabazali, sizosula lolo lwazi. Uma ukholwa ukuthi singaba neminye imininingwane kusuka noma enganeni engaphansi kweminyaka eyi-16, sicela uxhumane nathi ku privacy@astroshopee.org
Singaqoqa futhi sihlanganise izinhlobo ezahlukahlukene zolwazi ndawonye, ​​futhi ngokubambisana sibhekise kulo lonke lolu lwazi kule Nqubomgomo Yobumfihlo ngokuthi 'Ulwazi'. Ngezansi uhlobo loLwazi esingaluqoqa:
Imininingwane Osinikeza yona. Singaqoqa imininingwane osinikeza yona, njenge:
lapho ubhalisa noma usebenzisa iSayithi, noma ubhalisela noma iyiphi insizakalo eSizeni, singakucela ukuthi unikeze imininingwane yakho ongakhonjwa ngayo, njengegama, ikheli leposi, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, noma enye eminye imininingwane yokuxhumana.
singakucela ukuthi unikeze imininingwane yakho uma ufaka umncintiswano noma ama-sweepstake axhaswe yithi noma uphendula izinhlolovo esingahle sizithumele futhi sicele ukuthi sizigcwalise eSizeni.
lapho ukhulumisana nathi ukubika inkinga ngeSayithi, noma wenze eminye imibuzo ejwayelekile. Singagcina amarekhodi namakhophi ezincwadi zakho (kufaka phakathi amakheli e-imeyili, izinombolo zocingo, kanye neminye imininingwane oyinikezile).
Singase siqoqe imininingwane ethile yezobuchwepheshe nokusetshenziswa lapho usebenzisa iSayithi lethu, njengohlobo lwedivayisi, isiphequluli, kanye nohlelo olusebenzisayo, okokuhlonza amadivayisi okuhlukile, ikheli le-IP, izilungiselelo zedivayisi neziphequluli, amakhasi ewebhu owavakashelayo, kufaka phakathi imininingwane mayelana uxhumana kanjani neSayithi lethu kanye nalabo esisebenzisana nabo kanye nolwazi olusivumela ukuthi siqaphele futhi sihlanganise umsebenzi wakho kuwo wonke amadivayisi nakuSayithi. Singabona idivayisi yakho ukukunikeza okuhlangenwe nakho okwenzelwe wena nokukhangisa kuwo wonke amadivayisi owasebenzisayo. Lapho kufanele khona sizoqoqa kuphela leyo mininingwane ngemvume yakho yangaphambilini. Sicela ubheke Izinketho Zakho kanye nezigaba zethu zenqubomgomo yamakhukhi ukuthola eminye imininingwane.
Ungahle ukwazi ukufinyelela kuzici zeSayithi ngemiphakathi yangaphandle, izinkundla zokuxhumana, nezindawo zokuxhumana, izinsiza, ama-plug-ins, kanye nezicelo ('Amasayithi Wezindaba Zomphakathi'). Amasethingi akho obumfihlo kulawo Amasayithi Womphakathi Wezindaba, kanye nezinqubomgomo zawo zobumfihlo, kuzonquma imininingwane yomuntu kanye neminye engase iqoqwe futhi isetshenziswe yilezi Zindawo Zokuxhumana.
Sikwazi ukufinyelela kulwazi olumayelana nendawo okuyo, njengezwe lakho, uma ulunikeza noma ngolwazi lwedivayisi (njengekheli le-IP), noma indawo yedivayisi yakho lapho ufinyelela eSizeni ngedivayisi yakho yeselula. Lapho kufanele khona, sizoqoqa kuphela leyo mininingwane ngemvume yakho yangaphambilini.
Yisiphi isisekelo somthetho esinaso sokucubungula idatha yakho yomuntu siqu?
Sisebenza kuphela imininingwane yakho ngezinhloso ezisemthethweni. Ukusetshenziswa kwemininingwane yakho kuzolungiswa ngesisekelo sendawo eyodwa noma eziningi 'zokucubungula' zomthetho ezihlinzekelwe ku-EU General Data Protection Regulation (i-GDPR).
Ithebula elingezansi liqukethe incazelo yobubanzi bezizathu ezahlukahlukene zokucubungula zomthetho ezitholakala ngaphansi kwe-GDPR iastroshopee ethembele kuyo lapho iqoqa imininingwane:
Ukusebenza kwenkontileka: lapho sidinga khona imininingwane yakho ukuze ungene esivumelwaneni nawe futhi sikunikeze izinsizakalo zethu.
Izintshisekelo ezisemthethweni: lapho sisebenzisa khona imininingwane yakho ukufeza intshisekelo esemthethweni futhi izizathu zethu zokuyisebenzisa zidlula noma yikuphi ukubandlululwa kwamalungelo akho okuvikela idatha.
Izimangalo zomthetho: lapho imininingwane yakho idingeka khona ukuze sivikele, sishushise noma senze isimangalo esibhekiswe kuwe, thina noma umuntu wesithathu.
yini isibonakaliso se-zodiac ngoJulayi 31
Izibopho zethu zomthetho namalungelo ethu: lapho kudingeka ukuthi sicubungule idatha yakho yomuntu siqu ngaphansi kwesibopho esisemthethweni ngaphakathi kwe-EU.
Imvume: lapho uvumile ukusebenzisa kwethu imininingwane yakho (lapho uzobe unikezwe ifomu lokuvuma maqondana nanoma yikuphi ukusetshenziswa okunjalo futhi ungahoxisa imvume yakho noma kunini ngokunikeza isaziso privacy@astroshopee.org
Ukunikezela ngemikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo:
Sisebenzisa Ulwazi esiluqoqayo mayelana nawe ukufeza izicelo zakho zemikhiqizo, uhlelo, amasevisi, nokuqukethwe nokunikeza, ukuthuthukisa, ukugcina, ukwenza ngezifiso, ukuvikela, nokwenza ngcono ulwazi lwakho kanye neminikelo yethu. Isibonelo, sisebenzisa Ulwazi oluqoqwe kumasayithi ethu (i) ukuhlinzeka ngokuqukethwe, imikhiqizo, izinsizakalo, kanye nezibuyekezo (ii) ukunikeza izaziso mayelana ne-akhawunti yakho noma okubhaliselwe, (iii) ukukuvumela ukuthi ufunde futhi uthumele imibono, noma (iv) ukuvumela ukufaka ukukhushulwa, imincintiswano, nama-sweepstakes.
Ukucubungula Izakhi Ngaphansi kwe-GDPR:
Ukufeza izibopho zenkontileka nezomthetho; futhi ngemvume yakho (lapho kudingeka khona)
Izintshisekelo Ezisemthethweni (lapho kufanele khona)
Ukwenza ngcono nokuthuthukisa imikhiqizo nezinsiza ezintsha; ukwandisa ukusebenza kahle; ukuvikela ukukhwabanisa; ukugcina imininingwane yakho yangaphambilini yokusebenzisa imikhiqizo kanye / noma izinsizakalo okungenzeka ukuthi uzithengile noma ubukade unentshisekelo kuzo, ukuze iphakamise eminye imikhiqizo engaba nentshisekelo kuyo.
Sisebenzisa imininingwane esiyiqoqela ku- (i) ukukuthumela imininingwane ngamaphromoshini, iminikelo, nezici zethu, (ii) ukuhlinzeka ngezikhangiso ezisuselwa kuzintshisekelo zakho nendawo okuyo, (iii) ukuzibandakanya nezici ezisebenzisanayo, imisebenzi, kanye namaSayithi ezeMidiya Yezenhlalo ukuhlinzeka nawe, noma uvumele amaSocial Media Sites ukuthi akunikeze izikhangiso ezisuselwa kuzintshisekelo zakho, (iv) kwesinye isikhathi sisebenzisa lolu Lwazi ukunikela, ukumaketha, noma ukukhangisa imikhiqizo, izinhlelo, noma izinsiza kuwe ezivela kithi nakwizinhlangano zethu, ibhizinisi ophathina bethu, nezinkampani zangaphandle ezikhethiwe, noma (v) kithi nabasebenzisana nathi, ophathina bebhizinisi, bese ukhetha abantu besithathu ukukhomba, ukunikela, noma ukukhangisa imikhiqizo, izinhlelo, noma izinsizakalo ezingaba nentshisekelo kuwe.
Izintshisekelo ezisemthethweni nemvume yakho (lapho kudingeka khona)
Ukukhuthaza imikhiqizo yethu kanye nezinsiza kubasebenzisi bethu, ukuhlinzeka ngeminikelo ehambisanayo, amathuba kanye nezinsizakalo ezingaba nentshisekelo kuwe.
Sisebenzisa Ulwazi olumayelana nawe ukuxhumana nawe, njenge (i) ukukwazisa uma uphumelela omunye wemincintiswano yethu noma ama-sweepstake noma lapho senza izinguquko kuzinqubomgomo noma imigomo yethu, (ii) ukuphendula imibuzo yakho, noma (iii) ) ukuxhumana nawe mayelana ne-akhawunti yakho.
Ukunikeza kanye / noma ukudlulisa imininingwane ebalulekile; ukwandisa ukusebenza kahle; ukuphatha, ukuthuthukisa, noma ukuthuthukisa amasevisi nemikhiqizo emisha; izibalo ezihlanganisiwe.
Ngezinhloso zokuphepha nokuhlaziya nokuthuthukisa ngokuqhubekayo amaSayithi ethu kanye nezinsizakalo.
Sisebenzisa imininingwane yezobuchwepheshe neyokusetshenziswa ukuthuthukisa ukwakheka kwethu, ukusebenza kwethu nokuqukethwe futhi sikwazi ukusenza ngezifiso isipiliyoni sakho ngokuqukethwe neminikelo yethu. Sisebenzisa lolu Lwazi (i) ukuhlinzeka, ukuthuthukisa, ukugcina, ukwenza ngezifiso, ukuvikela, nokwenza ngcono imikhiqizo yethu, izinhlelo zethu, nezinsizakalo zethu, nokuqhuba ibhizinisi lethu, (ii) ukwenza ama-analytics, kufaka phakathi ukuhlaziya nokubika ngokusetshenziswa nokusebenza , (iii) ukuvikela, ukukhomba, nokuvimbela ukukhwabanisa kanye nokunye okungekho emthethweni, (iv) ukudala idatha ehlanganisiwe emayelana namaqembu noma izigaba zabasebenzisi bethu, kanye (iv) nokuvimbela ukukhwabanisa.
Ukufeza izibopho zenkontileka nezomthetho, izintshisekelo ezisemthethweni, nemvume yakho (lapho kudingeka khona)
Ukuhlaziya imininingwane kusuka ekuvakasheni kwakho nasekusebenzisaneni kwakho namaSayithi ukuze ube nokuqonda okungcono kokusetshenziswa kwawo ukuze sikwazi ukuthuthukisa ulwazi olunembile.
Ukumaketha ngamanethiwekhi okuxhumana nabantu abavela eceleni.
Sisebenzisa imininingwane yakho lapho uxhumana nezici zokuxhumana nabantu besithathu ukukunikeza ngezikhangiso futhi uzibandakanya nawe kumanethiwekhi omphakathi wesithathu. Ungafunda kabanzi mayelana nokuthi lezi zici zisebenza kanjani, imininingwane yephrofayili esiyithola ngawe, futhi uthole ukuthi ungakhetha kanjani ukuphuma ngokubuyekeza izaziso zobumfihlo zenethiwekhi ezifanele zomuntu wesithathu.
Inzalo esemthethweni, futhi ngemvume yakho njengoba itholwe yithina noma yinoma iyiphi inethiwekhi yomunye umuntu (lapho kudingeka khona)
Ukuhlaziya imininingwane kusuka ekuvakasheni kwakho nasekusebenzisaneni kwakho namaSayithi ukuze ube nokuqonda okungcono ngokusetshenziswa kwawo ukuze sikwazi ukuthuthukisa ulwazi olunembile, sinikeze okunikezwayo okwenzelwe wena, amathuba kanye nezinsizakalo ezingaba nentshisekelo kuwe.
Ukuhambisana nokushintsha isakhiwo sebhizinisi lethu.
Sisebenzisa Ulwazi esiluqoqayo ukuthola, ukuphenya, nokuvimbela imisebenzi ephula imigomo yethu yokusebenzisa, engaba yinkohliso, yephule ilungelo lobunikazi, noma eminye imithetho, ukuthobela izidingo zomthetho, nokuvikela amalungelo ethu namalungelo nokuphepha kwabasebenzisi bethu. nabanye. Singaphinde sinikeze ngemininingwane yakho yangasese kunoma ngubani ongaba isitholi noma umtshali zimali kunoma iyiphi ingxenye yebhizinisi likaastroshopee ngenhloso yalokho kutholwa noma ukutshalwa kwezimali.
Ukufeza izibopho zenkontileka nezomthetho
Ukuvikela izintshisekelo zebhizinisi lethu, impahla namanye amalungelo, ukuvikela ubumfihlo, ukuphepha namanye amalungelo omphakathi.
Iastroshopee ilawula imininingwane yakho futhi ithathwa njengesilawuli sedatha njengoba kuchaziwe ku-GDPR. Singabelana futhi sidalule Ulwazi oluhlanganisiwe nolukhonjwe ngabasebenzisi bethu ngaphandle komkhawulo.
Lapho sihlanganisa khona amaprosesa wedatha acubungula imininingwane yomuntu ngaphandle kwe-EEA sizoqinisekisa ukuthi kuzoba nezinga elifanele lokuvikelwa. Ngaphezu kwalokho, sizosebenzisa izivikelo zomthetho ezilawula lokho kudluliswa, njengezinto ezifana nezimodeli zesivumelwano, imvume yabantu, noma ezinye izizathu zomthetho ezivunyelwe izidingo zomthetho ezisebenzayo.
Amazwe athile angaphandle kwe-EEA avunyelwe yi-European Commission njengokunikela ngokuvikelwa okulingana nemithetho ye-EEA yokuvikela imininingwane. Imithetho yokuvikela idatha ye-EU ivumela iastroshopee ukuthi idlulisele ngokukhululekile imininingwane yomuntu emazweni anjalo. Sicela uxhumane nathi ku- privacy@astroshopee.org uma ungathanda ukubona ikhophi lezivikelo esizisebenzisayo maqondana nokuthunyelwa kwedatha yakho yomuntu siqu.
Abahlinzeki Bezinsizakalo . Sihlanganyele le mikhakha elandelayo yama-processors wedatha acubungula imininingwane yomuntu esenzela thina: osonkontileka bethu, abahlinzeki bezinsizakalo, abahlinzeki bokuqukethwe, nabanye abantu besithathu esisebenzisela ukusekela ibhizinisi lethu bangaba nokufinyelela Olwazini ukusiza ukufeza izinsizakalo abazenzayo okwethu, kufaka phakathi: ukudala, ukugcina, ukusingathwa kanye nokulethwa kwamaSayithi ethu, imikhiqizo, kanye nezinsizakalo; ukwenza ukumaketha (isibonelo ukukunikeza izikhangiso ezihlosiwe ngemvume efanele); ukuphatha ukukhokha, i-imeyili nokugcwaliseka kwe-oda; ukuphatha imincintiswano; ukwenza ucwaningo nokuhlaziya; nenkonzo yamakhasimende.
Ukumaketha ngabathintekayo nabangaphandle. Singadalula Ulwazi koxhumana nabo, ophathina bebhizinisi, kanye nezinkampani zangaphandle (isb., Abathengisi, abakhangisi, ama-ejensi esikhangiso, amanethiwekhi wokukhangisa nezinkundla, izinhlangano zocwaningo, nezinye izinkampani) abazenzo zabo zingamboziwe yile Nqubomgomo Yobumfihlo futhi bazosebenza njengomlawuli. Lezi zinhlangano zinganikela, zinikele, zithuthukise, zimakethe, futhi ngenye indlela zixhumane nawe ngemikhiqizo nezinsizakalo zazo. Sizohlala sicela imvume yakho ngaphambi kokudalulwa okunjalo.
Abaxhasi nokwenyusa ngokubambisana . Kwesinye isikhathi sinikela ngokuqukethwe noma ngezinhlelo (isb., Imincintiswano, ama-sweepstake, ukukhushulwa, noma ukuhlanganiswa kweSocial Media Site) axhaswe noma afakwe uphawu lwenkampani yangaphandle. Ngenxa yalobu budlelwano, abantu besithathu baqoqa noma bathola imininingwane kuwe lapho ubamba iqhaza kulo msebenzi. Asinakulawula ukusetshenziswa kwalaba bantu besithathu lolu Lwazi. Sikukhuthaza ukuthi ubheke ukuvezwa kobumfihlo kwanoma yimuphi umuntu wesithathu ukuze ufunde ngemikhuba yabo yedatha ngaphambi kokubamba iqhaza kulo msebenzi.
Amasayithi axhunyiwe . Amanye amasayithi aqukethe izixhumanisi kwamanye amasayithi, kufaka phakathi Amasayithi Omphakathi. Singahlanganisa izinhlelo zokuxhumana zezinhlelo zokuxhumana noma ama-plug-ins ('ama-plug-ins') avela kumanethiwekhi omphakathi, kufaka phakathi i-Facebook, i-Twitter, i-Instagram, iPinterest namanye, kumaSayithi ethu. Ama-plug-in angadlulisa imininingwane emayelana nawe ayixhume ku-Platform ngaphandle kokuthatha isenzo sakho. Lolu lwazi lungahle lubandakanye inombolo yakho kamazisi yomsebenzisi wasepulatifomu, okuyo iwebhusayithi okuyo, nokuningi. Ukusebenzisana ne-Plug-in kuzodlulisa imininingwane ngqo kuleyo nethiwekhi yomphakathi ye-Plug-in futhi leyo mininingwane ingabonakala kwabanye kuleyo ndawo. Ama-plug-in alawulwa yinqubomgomo yobumfihlo yeplatifomu efanelekile, hhayi Inqubomgomo yethu.
Izinhloso Zokuqinisa Umthetho Nezomthetho . Singadalula imininingwane ngokuphendula inqubo yezomthetho, isibonelo ekuphenduleni umyalo wenkantolo noma isamanisi, noma ngokuphendula isicelo se-ejensi yokuphoqelela umthetho. Singadalula futhi leyo mininingwane kubantu besithathu: (i) ngezinhloso zokuvikela ukukhwabanisa nokunciphisa ubungozi besikweletu, (ii) lapho sikholwa ukuthi kunesidingo sokuphenya, ukuvimbela noma ukuthatha izinyathelo mayelana nezinto ezingekho emthethweni, (iii) ukuphoqelela amalungelo ethu avela kunoma yiziphi izinkontileka ezifakwe phakathi kwakho nathi, kufaka phakathi Imigomo Yokusebenzisa, le Nqubomgomo, kanye nokubhila nokuqoqa, (iv) uma sikholwa ukuthi ukudalulwa kuyadingeka noma kufanelekile ukuvikela amalungelo ethu, impahla yethu, noma ukuphepha noma lokho yamakhasimende ethu, abasebenzisi, osonkontileka noma abanye, (v) njengoba kufunwa ngenye indlela ngumthetho.
Ukuxhumana Kwezokumaketha nokwabelana namaqembu wesithathu. Uma ubhalisele ukuthola izincwadi zezindaba kanye / noma imininingwane yezokumaketha, unethuba lokukhetha okuthandayo maqondana nokuthola ukuxhumana kwezokumaketha kithina, kanye nokwabelana kwethu ngolwazi nabalingani ngezinjongo zabo zokumaketha ngqo.
Ungabuyekeza okuncamelayo maqondana nokuthola ukuxhumana okuthile kokukhangisa okuvela kithi, nokwabelana kwethu ngolwazi lomuntu siqu nabantu besithathu. Ungakwenza lokho ngokuxhumana nathi ku- privacy@astroshopee.org . Ungase futhi uphume ekutholeni ukuxhumana kwezokumaketha nge-imeyili, ngokulandela imiyalo 'yokuzikhipha ohlwini' enikezwe kuwo wonke ama-imeyili owathola kithi. Ungase futhi ulungise izaziso zakho zohlelo lokusebenza kudivayisi yakho yeselula ngokusebenzisa izilungiselelo zakho zedivayisi noma zohlelo lokusebenza.
Izinketho zesikhangiso . Singasebenza nabantu besithathu ukwethula izikhangiso, futhi sihlanganyele ekuqoqeni idatha, ekubikeni, ekuhlaziyeni amasayithi, ukulethwa kwezikhangiso kanye nokukalwa kwempendulo kumaSayithi ethu nakumawebhusayithi wesithathu nezinhlelo zokusebenza ngokuhamba kwesikhathi. Lezi zinkampani zangaphandle zingasebenzisa amakhukhi, ama-web beacons, amaphikseli, nobunye ubuchwepheshe obufanayo ukwenza lo msebenzi. Bangathola imininingwane ngamawebhusayithi owavakashelayo, izinhlelo ozisebenzisayo, nolunye ulwazi kuzo zonke iziphequluli zakho namadivayisi ukuze wethule ukukhangisa okungase kwenzelwe izintshisekelo zakho ngaphakathi nangaphandle kwamaSayithi ethu nakwamanye amapulatifomu. Lolu hlobo lokukhangisa lwaziwa njengokukhangisa okususelwa kuntshisekelo, futhi lungasetshenziselwa ukuhlanganisa iziphequluli ezahlukahlukene kanye namadivayisi ndawonye ngenjongo yokukhangisa okususelwa kuntshisekelo ne-analytics.
Ngeminye imininingwane mayelana nokukhangisa okususelwa kuntshisekelo kudeskithophu yakho noma kusiphequluli sakho seselula, kanye nokukwazi kwakho ukuphuma kulolu hlobo lokukhangisa ngabantu besithathu, sicela uvakashele Izinketho Zakho Eziku-inthanethi kanye / noma i-EDAA Isinyathelo Esizilawulayo Sokukhangisa Ngokuziphatha Kwe-inthanethi . Sicela wazi ukuthi noma ikuphi ukukhetha ongakusebenzisa ngalezi zinhlelo kuzosebenza kuphela ekukhangisweni okususelwa kuntshisekelo ngabantu besithathu obakhethayo. Ungaqhubeka nokuthola ukukhangisa, kepha lokho kukhangisa kungahle kungahlobene nezintshisekelo zakho.
Ungaba nezinketho eziningi ngokuya ngohlelo lwakho lokusebenza noma idivayisi yeselula. Iningi lezinhlelo zokusebenza zedivayisi zinikela ngemiyalo yazo yokuthi ungakunciphisa kanjani noma ukuvimbe ukulethwa kokukhangisa okungaphakathi nohlelo okwenzelwe wena. Ungabuyekeza izilungiselelo zobumfihlo kuhlelo lokusebenza olunjalo ukuze ufunde ngokulinganiselwa kokukhangisa okungaphakathi nohlelo okwenzelwe wena. Futhi ungakhubaza imininingwane eqondile yendawo kusuka kudivayisi yeselula ngokusebenzisa amasethingi wedivayisi yakho yeselula bese ukhetha ukunciphisa lelo qoqo.
INQUBOMGOMO YOKUPHEPHA YABASEBENZISI BE-EU
Amakhukhi nobunye ubuchwepheshe . Thina, nabasebenzisana nathi, abahlinzeki benkampani yangaphandle, kanye nabalingani bebhizinisi singathumela 'amakhukhi' kwikhompyutha yakho noma basebenzise ubuchwepheshe obufanayo ukuthuthukisa ulwazi lwakho oluku-inthanethi kumaSayithi ethu nangokukhangisa kwethu kanye nabezindaba kwi-Intanethi nakuzinhlelo zokusebenza zeselula.
Amakhukhi amafayili wombhalo amancane aqukethe imininingwane elandelwa kudivayisi yakho lapho uvakashela iwebhusayithi, kufaka phakathi amaSayithi ethu. Amakhukhi abese ebuyiselwa emuva kusizinda sewebhu ekuvakasheni kwakho okulandelayo kuleso sizinda. Iningi lamakhasi ewebhu aqukethe izinto ezivela ezizindeni eziningi zewebhu ngakho-ke lapho uvakashela iwebhusayithi, isiphequluli sakho singathola amakhukhi emithonjeni eminingana. Amakhukhi ayasebenziseka ngoba avumela iwebhusayithi ukuthi ibone idivayisi yomsebenzisi. Amakhukhi akuvumela ukuthi uzulazule kumawebhusayithi kahle, khumbula okuncamelayo futhi ngokujwayelekile uthuthukise ulwazi lomsebenzisi. Zingasetshenziselwa ukuvumelanisa ukukhangisa nezintshisekelo zakho ngokulandela ukuphequlula kwakho kuwo wonke amawebhusayithi. Amakhukhi eseshini asuswa ngokuzenzakalela lapho uvala isiphequluli sakho futhi amakhukhi aqhubekayo ahlala kudivayisi yakho ngemuva kokuthi isiphequluli sivaliwe (isb.ukukhumbula okuncamelayo komsebenzisi lapho ubuyela kumasayithi).
Singasebenzisa futhi amaphikseli noma 'ama-web beacon' aqapha ukusetshenziswa kwakho kwamaSayithi ethu. Ama-web beacon amafayili amancane kagesi ahlanganiswe kumaSayithi noma ukuxhumana kwethu (isb. Ama-imeyili) asivumelayo, ngokwesibonelo, ukubala abasebenzisi abavakashele lawo makhasi noma abavule i-imeyili noma ezinye izibalo ezihlobene. Futhi singahlanganisa 'ama-Software Development Kits' ('SDKs') ezinhlelweni zethu zokusebenza ukwenza imisebenzi efanayo njengamakhukhi namabhikhoni ewebhu. Isibonelo, ama-SDK angaqoqa imininingwane yezobuchwepheshe neyokusetshenziswa njengezikhombi zamadivayisi weselula nokuxhumana kwakho neSayithi nezinye izinhlelo zokusebenza zeselula.
Singahle futhi sisebenzise amakhukhi nobunye ubuchwepheshe (i) ukuhlinzeka, ukuthuthukisa, ukugcina, ukwenza ngezifiso, ukuvikela, nokwenza ngcono amasayithi ethu, imikhiqizo, izinhlelo, nezinsizakalo nokwenza ibhizinisi lethu, (ii) ukwenza i-analytics, kufaka phakathi ukuhlaziya kanye bika ngokusetshenziswa nokusebenza kwamaSayithi ethu nezinto zokwazisa, (iii) ukuvikela, ukukhomba, nokuvimbela ukukhwabanisa nokunye okwenziwa ngokungemthetho, (iv) ukudala idatha ehlanganisiwe emayelana namaqembu noma imikhakha yabasebenzisi bethu, (v) ukuvumelanisa abasebenzisi kuwo wonke amadivayisi, abaxhumana nabo, ozakwethu bebhizinisi, bese ukhetha izinkampani zangaphandle, futhi (vi) kithina nakwizinhlangano esisebenzisana nabo, ozakwethu bebhizinisi, bese ukhetha izinkampani zangaphandle ukukhomba, ukunikela, noma ukuthengisa, imikhiqizo, izinhlelo, noma amasevisi. Amakhukhi nobunye ubuchwepheshe busiza futhi balinganise ukusebenza kwezikhangiso eziboniswe noma ezilethwe ngathi noma ngathi noma / noma amanye amanethiwekhi noma amasayithi.
Njengamanje asiziphenduli izimpawu ze-Do Not Track ngoba indinganiso yezobuchwepheshe efanayo ayikenziwa. Siyaqhubeka nokubuyekeza ubuchwepheshe obusha futhi singaqala ukusebenzisa indinganiso uma sekudaliwe eyodwa.
Ukuphatha amakhukhi nobunye ubuchwepheshe.
Lezi amakhukhi zibalulekile ukuze ukwazi ukujikeleza amaSayithi futhi usebenzise izici zawo. Ngaphandle kwalawa makhukhi, izinsizakalo ozicele (njengokuzula phakathi kwamakhasi) azikwazi ukunikezwa. Ithebula elilandelayo libeka ezinye izibonelo zalezi zinhlobo zamakhukhi:
Sisebenzisa amakhukhi ahlaziyayo ukuhlaziya ukuthi izivakashi zethu zisebenzisa kanjani amaSayithi nokuqapha ukusebenza kwazo. Lokhu kusivumela ukuthi sinikeze umuzwa wekhwalithi ephezulu ngokwenza ngezifiso ukunikezwa kwethu futhi sikhombe ngokushesha futhi silungise noma yiziphi izinkinga ezivelayo. Isibonelo, singasebenzisa amakhukhi wokusebenza ukugcina ithrekhi ukuthi imaphi amakhasi athandwa kakhulu, iyiphi indlela yokuxhumanisa phakathi kwamakhasi esebenza kakhulu, nokuthola ukuthi kungani amanye amakhasi athola imilayezo yamaphutha. Singahle futhi sisebenzise lawo makhukhi ukugqamisa ama-athikili noma izinsizakalo zeSayithi esicabanga ukuthi zizoba nentshisekelo kuwe ngokususelwa ekusebenziseni kwakho amaSayithi. Imininingwane eqoqwe yilawa makhukhi ayihlotshaniswa nemininingwane yakho ephathelene nathi noma osonkontileka bethu futhi isetshenziswa kuphela kwifomu ehlanganisiwe nengaqondakali. Ithebula elilandelayo libeka ezinye izibonelo zalezi zinhlobo zamakhukhi:
Ungakhetha ukuphuma ekulandeleni nge-Google Analytics ngokuvakashela: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB .
Sisebenzisa amakhukhi ukukunikeza ukusebenza okuthile. Isibonelo, ukubuka okuqukethwe kwevidiyo, ukusakazwa bukhoma, noma ukukhumbula izinqumo ozenzayo nokunikeza ngezici ezithuthukisiwe nezengeziwe zomuntu siqu. Lawa makhukhi awasetshenziswanga ukulandelela ukuphequlula kwakho kwamanye amasayithi. Ithebula elilandelayo libeka ezinye izibonelo zalezi zinhlobo zamakhukhi:
Amakhukhi wokukhangisa (noma amakhukhi okukhomba) aqoqa imininingwane mayelana nemikhuba yokuphequlula ehambisana nedivayisi yakho futhi isetshenziselwa ukwenza ukukhangisa kuhambisane kakhulu nawe nezintshisekelo zakho. Lawa makhukhi abuye alinganise ukusebenza kwemikhankaso yokukhangisa futhi alandele ukuthi izikhangiso zikhonjiswe kahle yini. Ungangena kwi-EU Consent Manager ezinyaweni zamaSayithi uma ufisa ukushintsha okuthandayo kwemvume. Uhlu olulandelayo lubeka ezinye izibonelo zalezi zinhlobo zamakhukhi:
Umthombo wamakhukhi: DoubleClick:
abantu abazalwe ngosepthemba 7
Uma ungathanda ukuphuma, ungakwenza lokho ku- https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Amakhukhi wokukhangisa kumasayithi axhunyiwe
Amakhukhi wokukhangisa angasetshenziswa ngamasayithi wezokuxhumana axhumene neSayithi lethu, njengezinkinobho ze-'Yabelana 'noma abadlali be-audio / video abashumekiwe, ngaphezu kokunikeza ukusebenza okuceliwe. Amasayithi ezokuxhum ahlinzeka ngalezi zinsizakalo ngenhloso yokubona ukuthi wena (noma ngokunembile kakhulu idivayisi yakho) uvakashele amawebhusayithi athile. Amasayithi anjalo ezokuxhumana abeka phansi amakhukhi wokukhangisa lapho uvakashela amaSayithi wethu nalapho usebenzisa izinsizakalo zawo futhi uzulazula kude namaSayithi ethu. Izindlela zokwenza amakhukhi ezinye zalezi zingosi zokuxhumana zibekwe ngezansi:
Inqubomgomo ye-Cookie ye-Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Inqubomgomo ye-Cookie ye-Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Inqubomgomo yekhukhi ye-Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Inqubomgomo Yamakhukhi kaPinterest: https://policy.pinterest.com/en/cookies
Inqubomgomo Yamakhukhi yakwa-YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies
Inqubomgomo ye-SoundCloud Cookie: https://soundcloud.com/pages/cookies
Inqubomgomo ye-Google Plus Cookie: https://policies.google.com/technologies/cookies
AMALUNGELO WAKHO OKUTHOLA, UKULUNGISA NOKUSUSA IMINININGWANE YAKHO
Unelungelo lokusicela ikhophi lemininingwane yakho, ukulilungisa, ukusula noma ukukhawulela ukulicubungula, nokuthola imininingwane oyinikezile. Ungase futhi usicele ukuthi sidlulisele imininingwane ethile oyinikeze umuntu wesithathu ngekhompyutha.
Unelungelo lokuphikisa ukucutshungulwa kwemininingwane yomuntu siqu ngokuya ngezintshisekelo zethu ezisemthethweni. Lapho sicele khona imvume yakho ukucubungula ulwazi, unelungelo lokuhoxisa le mvume noma kunini.
Uma unezinkinga ezingaxazululiwe, unelungelo lokukhononda kusiphathimandla sokuvikelwa kwedatha se-EU lapho uhlala khona, usebenza noma lapho ukholwa ukuthi kungenzeka ukuthi kwephulwe khona. Sicela wazi ukuthi okunye okuhlukile kusebenza ekusebenziseni kwalawa malungelo ngakho-ke ngeke ukwazi ukusebenzisa wonke lawa malungelo kuzo zonke izimo.
Lawa malungelo akhonjelwe ekukhululweni okuthile ukuvikela izintshisekelo zomphakathi (isb. Ukuvimbela noma ukutholwa kobugebengu) kanye nezintshisekelo zethu (isb. Ukugcinwa kwelungelo elisemthethweni). Kwezinye izimo, lokhu kungasho ukuthi siyakwazi ukugcina imininingwane yakho noma ngabe uhoxisa imvume yakho. Sizophendula izicelo eziningi kungakapheli inyanga eyodwa.
Ungazikhipha ohlwini kunoma iziphi izincwadi zezindaba noma ama-imeyili ahlukahlukene wokuphromotha nganoma yisiphi isikhathi ngokuchofoza izixhumanisi 'zokuzikhipha ohlwini' ezinikezwe kulokho kuxhumana. Ungahle ungaphumi ekuxhumaneni okuhlobene neSayithi, njengokuqinisekiswa kwe-akhawunti, iziqinisekiso zokuthenga nemiyalezo yokuphatha, inqobo nje uma ubhaliswe namaSayithi.
Izikhathi zethu zokugcina idatha yomuntu siqu zisuselwa kuzidingo zebhizinisi nezimfuneko zomthetho. Sigcina idatha yomuntu siqu uma nje kudingeka ngezinhloso zokucubungula lapho idatha yomuntu siqu iqoqelwe khona, nanoma iyiphi enye inhloso evumelekile, ehlobene. Isibonelo, sigcina imininingwane ethile yokuthengiselana nezincwadi kuze kuphele isikhathi esinqunyiwe sesimangalo esivela emsebenzini, noma ukuhambisana nezimfuneko zomthetho maqondana nokugcinwa kwaleyo datha.
Sisebenzise izindlela ezifanelekile zobuchwepheshe nezenhlangano ukuvikela ukucutshungulwa kwedatha yomuntu siqu. Lezi zivikelo zizohluka ngokuya ngozwela, ifomethi, indawo, inani, ukusatshalaliswa nokugcinwa kwedatha yomuntu siqu, futhi kufaka nezinyathelo ezenzelwe ukugcina imininingwane yomuntu ivikelwe ekufinyeleleni okungagunyaziwe.
Sikhawulela ukufinyelela kwimininingwane yomuntu kubasebenzi nakwabanye abantu abadinga ukufinyelela kulolo lwazi ngezinjongo ezisemthethweni, ezifanele zebhizinisi.
Bonke abasebenzi bethu, osonkontileka kanye nabantu besithathu abazokwazi ukufinyelela kwimininingwane yomuntu uqobo emiyalweni yethu bazoboshelwa kwimfihlo futhi sisebenzisa izilawuli zokufinyelela ukukhawulela ukufinyelela kubantu abadinga lokho kufinyelela ekwenzeni imisebenzi yabo nemisebenzi.
Sinezinqubomgomo zokuphepha zolwazi ezikhona futhi izinqubomgomo nezinhlelo zayo zivame ukucwaningwa. Sikuthatha ngokungathí sina ukuphepha kwengqalasizinda yethu ye-IT.
Yize sithatha izinyathelo zokuphepha ezifanelekile ukuvikela imininingwane yakho yangasese, asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha kwemininingwane yakho yangasese. Noma ikuphi ukudluliswa kolwazi lomuntu siqu nge-Intanethi nangamapulatifomu weselula akuphephile ngokuphelele, ngakho-ke, noma ikuphi ukudluliswa kolwazi lomuntu siqu kuyingozi yakho. Asinasibopho sokugwema noma yiziphi izilungiselelo zobumfihlo noma izinyathelo zokuphepha esizinikezayo.
Ukuphepha nokuphepha kolwazi lwakho nakho kuncike kuwe. Lapho sikunikeze khona (noma lapho ukhethe khona) iphasiwedi yokufinyelela ezingxenyeni ezithile zamaSayithi ethu, unesibopho sokugcina le phasiwedi iyimfihlo. Akufanele wabelane ngephasiwedi yakho nanoma ubani.
Singavuselela Inqubomgomo yethu ngezikhathi ezithile. Sizokwazisa nganoma yiziphi izinguquko ezibonakalayo kule Nqubomgomo Yobumfihlo ngokubeka isaziso kumaSayithi ethu. Sikukhuthaza ukuthi ngezikhathi ezithile uhlole futhi ubuyekeze le Nqubomgomo ukuze wazi noma yiziphi izinguquko zakamuva.
Ukukhathazeka Kobumfihlo . Uma unokukhathazeka noma isikhalazo mayelana nobumfihlo kumaSayithi, sicela uxhumane nathi eastroshopee Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9thFloor, East Hollywood, CA, 1312312, U.S.A. noma usithumele i-imeyili ku-privacy@astroshopee.org. Sizokwenza konke okusemandleni ukuphendula kuwe ngesikhathi esifanele nangendlela efanelekile ukuze siphendule imibuzo yakho futhi sixazulule izinto ezikukhathazayo.
© astroshopee Digital Media, LLC. Wonke Amalungelo Agodliwe. Iastroshopee neastroshopee.com yizimpawu zokuhweba ezibhalisiwe zeastroshopee Digital Media, LLC
Owesifazane waseLibra Ascendant: Ofuna IHarmony
Izici Eziyinhloko Zezinkuni Monkey Chinese Zodiac Sign
Izici zomfazi we-gemini othandweni
Indoda ye-aquarius capricorn othandweni
umdlavuza wesilisa sagittarius ubungani besifazane
luyini uphawu lwe-16 zodiac
ungayinqoba kanjani inhliziyo yowesifazane wesifazane emuva
I-aquarius man taurus woman love ukuhambisana